Orinasa kitapo sakafom-biby any Sina
Sakafo alika Sakafo alika any anaty kitapo fonosana fonosana sakafo
Matetika ny kitapo sakafo alika eny an-tsena dia fonosina anaty harona plastika. Angamba samy mieritreritra ireo kitapo ireo fa tsy mitovy, tsy misy mahasamihafa azy, saingy tsia. Ny fonosana sakafo amin'ny biby dia azo atao anaty sosona roa, sosona telo, na sosona efatra aza. Andao hianatra bebe kokoa momba izany.
Kitapo ahitra saka namboarina namboarina nanangona kitapo fonosana
Ny kitapo ahitra saka dia entina mitazona ahitra saka. Ny haben'ny kitapo ahitra saka dia miankina amin'ny fahaizan'ny kitapo. Ny fitaovana fampiasa matetika amin'ny kitapo ahitra dia PET / PE na BOPP / PE. Mifidiana BOPP na PET arakaraka ny fepetra takiana amin'ny matte na glossy. Azontsika atao koa ny manampy ny famolavolana varavarankely eo amin'ny kitapo, mamela ny mpanjifa hahafantatra tsara kokoa izay ao anaty kitapo.
Kitapo sakafo alika avo lenta amin'ny foil
Ny kitapo ambany no karazana kitapo be mpitia indrindra amin'ny harona sakafom-biby, afaka mitazona sakafo biby an-tsaha izy, ary tsara tarehy eo amin'ny talantalana, manintona izy io. Ary ny kitapo mitsangana ary ny kitapo gusset dia malaza amin'ny sakafon'ny biby sy biby fiompy avokoa. tsakitsaky
Kitapo fako an'ny saka namboarina
Ny kitapo saka saka dia mety ho kitapo mijoro na kitapo gusset eo ankilany na kitapo ambany fisaka, ny kitapo mijoro dia ampirisihina hitazona ny fako saka kely sy salantsalany ary ny kitapo gusset ary kitapo ambany fisaka no ampirisihina hitazona lehibe fako saka volavola: azo ahosotra amin'ny sosona 2, sosona 3 na 4 sosona.
Kitapo sakafo trondro zipper fisaka
Ny kitapo fisakafoana trondro dia mitombo be dia be tato ho ato, amin'ny maha-biby haingo azy, dia mitombo hatrany ny fiompiana trondro, izay mitarika amin'ny sakafon'ny trondro dia lasa vokatra malaza. Mba hanampiana ny trondro hihinana sakafo mahavelona dia mihombo hatrany koa ny sakafon'ny trondro. Ny kitapo sakafon'ny trondro dia afaka manampy amin'ny fitehirizana ireo sakafon'ny trondro mandritra ny fotoana lava ary hitazomana ny fihavanan'ny sakafon'ny trondro.